Mihidy amin'ny fomba tsy maharitra ve ny fampiharana anao? Manana ny vahaolana izahay | Androidsis
Mandritra ny iray andro sy sasany maro amintsika no mijaly amin'ny fanidiana tampoka ny fampiharana marobe manandrana manokatra amin'ny finday izahay. Ary izany ve na dia amin'ny sehatra toa an'i Chromecast miaraka amin'ny Google TV aza, ny zavatra mitovy no mitranga Fa inona no mitranga? Tsotra ny valiny, hanome anao ny vahaolana amin'izany izahay.
Izany no izy Miresaka momba izany izahay raha mandefa Tapatalk dia mikatona rehefa manokatra azy ianao, ka raha manandrana manokatra azy indray ianao, mikatona indray. Mitranga amin'ny fampiharana marobe izany ary mihabetsaka ny mpampiasa no miatrika an'io olana lehibe io izay saika mamela ny rafitray ho tsy misy ilana azy. Soa ihany fa tsotra ny vahaolana.
1 Ahoana no hamahana ny fanidiana fampiharana tsy mandeha amin'ny findainao na amin'ny takelaka misy anao
2 Dingana voalohany tokony hatao: alao ny fanavaozana mandeha ho azy avy amin'ny Play Store
3 Dingana faharoa: WebView an'ny rafitra Android
4 Ahoana ny fanesorana ny WebView amin'ny rafitra Android amin'ny Chromecast amin'ny Google TV
Ahoana no hamahana ny fanidiana fampiharana tsy mandeha amin'ny findainao na amin'ny takelaka misy anao
Voalohany, ahoana Mitranga izany amin'ny 80% amin'ireo mpampiasa Android, azo antoka fa nohavaozina ho azy izy ireo fampiharana avy amin'ny Play Store. Ary ny olana dia misy iray ao anaty iray ny fanavaozana dia miteraka an'ity karazana olana ity amin'ny rafitra: Android System Webview.
Ao amin'ny ny kinova vaovao dia miteraka ireo olan'ny fanakatonana tsy mandeha amin'ny laoniny ireo mamela antsika amin'ny tanany mifatotra. Marina fa efa namoaka fanavaozana izay manamboatra azy i Google, fa raha sanatria ka manoro hevitra anao izahay mba esory ny fanavaozana an'ity fampiharana ity.
Android System Webview dia rindrambaiko natokana hanolorana ireo rindranasa anaty tranokala anatiny ary maro aminareo no hahafantatra momba ny Tapatalk sy andian-tantara hafa izay mamela antsika hanokatra rohy URL ao anatiny.
Dingana voalohany tokony hatao: alao ny fanavaozana mandeha ho azy avy amin'ny Play Store
Mba tsy hanavaozana azy ho azy ny Google mandra-pitenenan'i Google an'io olana voalaza io, dia hanafoana ny fanavaozana mandeha ho azy avy amin'ny Play Store izahay:
antsika mankany amin'ny Settings avy amin'ny menio ilany izahay avy amin'ny Play Store
Ny safidy fahatelo "Vaovao farany ny fampiharana", tsindrio izany
Misafidy izahay: "Aza manavao fampiharana mandeha ho azy"
Dingana faharoa: WebView an'ny rafitra Android
Handray ny dingana hamahana ity olana lehibe ity izahay:
Manokatra ny Google Play Store izahay
Mitady izahay Android System WebView
Manala ireo fanavaozana izahay
Namboarina ny olan'ny fanakatonana fampiharana tsy mety
Ahoana ny fanesorana ny WebView amin'ny rafitra Android amin'ny Chromecast amin'ny Google TV
Ho anao izay mahita fa tsy mandeha ny fampiharana sasany ao amin'ny Chromecast miaraka amin'ny Google TV, toy ny tranga misy amin'ny serivisy streaming streaming Movistar +, hanaraka an'io vahaolana io ihany izahay, na dia tsy mitovy amin'ny Google TV aza ny dingana tokony harahina:
Mandeha any amin'ny Google TV Settings ao amin'ny Chromecast izahay
Mandeha amin'ny Applications izahay
Izahay dia mijery ny faran'ny lisitra «Asehoy ny fampiharana ny rafitra»
Izahay izao dia mitady "Android System Webview"
Misafidy azy izahay ary manala ireo fanavaozana amin'ny bokotra iray ihany:
Ankehitriny ianao dia afaka mandefa ireo fampiharana nakatona tao amin'ny Google TV tsy nisy olana ary manohiza mijery ireo serivisy streaming izay nirodana toa an'i Movistar +.
Ary na dia marina aza fa nohavaozina izy, raha sanatria ka manidina ianao, ianao mamporisika anao izahay hiandry andro vitsivitsy mandra-pahavitrika indray ny fanavaozana mandeha ho azy ary havaozy ity app ity. Tsy misy na inona na inona mitranga satria tsy hainao ny manavao azy mandra-pandalo kely ity tadio ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Mihidy amin'ny fomba tsy mendrika amin'ny findainao ve ny fampiharana anao na amin'ny Chromecast amin'ny Google TV? Manana ny vahaolana izahay
Inona ny VSCO, ilay fampiharana fanovana sary miaraka amina vondrom-piarahamonina mahafinaritra